नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीका लागि आवेदन खुल्ला : समितिले तोक्यो यस्ता सर्तहरु – OnlinePahar
नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीका लागि आवेदन खुल्ला : समितिले तोक्यो यस्ता सर्तहरु
२८ माघ २०७७, बुधबार १२:४१ Basanta Khanal	0 Comments	bima
काठमाडौं । बीमा समितिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्न चाहाने इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थालाई आवेदन दिन सुचना प्रकाशन गरेको छ । समितिले आज एक सुचना जारी गर्दै २१ दिन भित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको हो ।
हाल नेपालमा सरकारको लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छ । अबका दिनमा पुनर्बीमा व्यवसायलाई बढी प्रभावकारी बनाउने मामलामा निजी क्षेत्रको लगानीमा थप एक पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्न दिने गरेर समितिले आह्वान गरेको हो । थप पुनर्बीमा कम्पनीको बिषयमा समितिले केही समयअघि अध्ययन पनि गरेको थियो । सोही अध्ययनको आधारमा समितिले एक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने गरि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । तर, बजारमा भने ४ ओटा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ । यस्तै, बीमा समितिले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीका लागि विभिन्न सर्त पनि तोेकेको छ । तोकिएको सर्त पुरा भएका प्रस्तावित कम्पनीले मात्र आवेदन दिनुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
समितिका अनुसार कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापुँजी १० अर्ब रुपैयाँको हुनुपर्ने छ । पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्न चाहाने इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थालाई आवेदन विभिन्न आठ सर्त लागू हुने सूचनामा उल्लेख छ ।
के-के छन् सर्तहरु ?
← आज खुल्ने सीइडीबी हाइड्रोपावरको आइपीओ : कस्तो छ कम्पनी, कति भर्दा उचित ? (सम्पूर्ण जानकारी )
आईपीएल : जब पोलार्डले बललाई ‘जा, जा’ भन्दै चौका गराए (भिडियो) →
लकडाउन खुकुलो भएसँगै काठमाडौंमा चहलपहल (फोटोफिचर)
२८ माघ २०७७, बुधबार ०८:१४ Basanta Khanal	0
प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच राति भेट भएको हो ? सर्वाेच्च अदालतबाट विज्ञप्ति जारी
२८ माघ २०७७, बुधबार १५:२८ Basanta Khanal	0
मैलुङ खोला जलविद्युतको आइपीओ बाँफाँड हुने मिति तोकियो
२८ माघ २०७७, बुधबार १६:४२ Basanta Khanal	0